Shabaab oo si la yaab leh uga hadlay is dhiibitaankii Sheekh Abuu Mansuur - Caasimada Online
Home Warar Shabaab oo si la yaab leh uga hadlay is dhiibitaankii Sheekh Abuu...
Shabaab oo si la yaab leh uga hadlay is dhiibitaankii Sheekh Abuu Mansuur
Muqdisho (Caasimada Online) – Warbaahinta Al-shaabaab ayaa lagu qoray warbixin looga ka hadlay wararka saakay soo baxay ee sheegaya in Sheikh Mukhtaar Roobow uu si rasmi ah isugu dhiibay maamulka Koonfur galbeed iyo Dowladda Soomaaliya.
Al-shabaab ayaa xaqiijiyay in Abuu Mansuur uu safka Xarakada Al-shabaab ka baxay Lix sano ka hor ka dib markii uu khilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo Hogaamiyihii Al-shabaab ee geeriyooday Axmed Cabdi Godane (Abuu Subeyr).
Al-shabaab ayaa sheegay in Sheikh Mukhtaar iyo 7-ka mid ah ilaaladiisa ay hadda ku sugan yihiin magaalada Xudur ee Gobolka Bakool halkaasi oo ay kulamo kula leeyihiin Saraakiil ka tirsan AMISOM iyo Dowladda Soomaaliya,sida hadalka loo dhigay.
Warbaahinda Al-shabaab ayaa cinwaan uga dhiga is dhiibitaanka Abuu Mansur: (Abuu Mansuur oo isku dhiibay Ciidamada Itoobiya iyo dowladda Federaalka).
Warbaahinada Al-Shabaab ayaa sidoo kale lagu qoray hadalado ay kamid ahaayeen (Sheekh Abu Mansuur oo mar soo noqday Afhayeenka Xarakada Al Shabaab Al Mujaahidiin ayaa Xarakada ka tegay muddo hadda laga joogo ku dhawaad lix sanadood ka hor, wuxuuna wixii xilligaas ka dambeeyay ku noolaa deegaanka Abal ee Wilaayada Baay iyo Bakool, isagoo halkaas ku haystay ilaalo kooban maadaama uu ku jiray dadka ay Maraykanku doondoonayaan.)